RW Rooble oo kulan degdega la yeeshay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed (Codsi ka yimid Guddoo...) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. RW Rooble oo kulan degdega la yeeshay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed (Codsi ka yimid Guddoo...) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
RW Rooble oo kulan degdega la yeeshay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed (Codsi ka yimid Guddoo…)
Ra’iisal wasaaraha xukuumada xil garsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan degdega la yeeshay Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Ra’iisal wasare ku xigeenka.
Kulanka ayaa looga hadlayey khilaafka weli ka taagan Guddiyada Doorashada ee Somaliland ayaa ka dambeeyay markii uu xirka isu shareeray khilaafka labada Garab ee siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland oo kulamo iska horjeeda ku qabtay magaalada Muqdisho.
Xafiiska Ra’iisul Wasaare ayaa sheegay inuu heshiis ay gaaraan ka sugayey labada nin ee ugu sareeya siyaasiyiinta Somaliland, isagoo karabay inay gaaraan xal ay heshiis ku yihiin oo ku saabsan khilaafka Doorashada guddoonka Guddiga Doorashada Gobollada Woqooyi.
Guddoomiye Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa la sheegay inuu Ra’iisul Wasaaraha ka codsaday in la siiyo muddo hal maalin ah, codsigaas oo uu Ra’iisul Wasaaruhu ka aqbalay.
Previous articleSenator Xuseen Sheekh oo shaaciyey sababtii Madaxweynaha K/Galbeed uga reebay tartanka Aqalka Sare
Next articleColaadda Somalida iyo Cafarta Itoobiya oo saameyn ku yeelatay Jabuuti iyo wararkii ugu danbeeyay..